Dhalinyarada iyo dhalinyarada - Caymiska Caafimaadka Maxaliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xarunta Caafimaadka Habdhaqanka > Dhallinyarada iyo Dhallinyarada
Dhallinyaradu waxay leeyihiin baahiyo caafimaad oo gaar ah iyo xuquuq sharci.
Dhalinyarada iyo dhalinyarada waxay leeyihiin baahiyo caafimaad oo u gaar ah
Dhalinyaradu waxay leeyihiin baahiyo gaar ah markay tahay xagga maskaxda, shucuurta, iyo caafimaadka jireed. Dhibaatooyinka caafimaad ee soo socda ayaa saameyn gaar ah ku leh dhalinyarada:
Niyadjab iyo walwal
Dhallinyaradu waxay uga nugul yihiin xoogsheegashada iyo isku dayga ismiidaaminta marka loo eego dadka waaweyn iyo carruurta. Dhallinta, arrimaha ku xadgudubka mukhaadaraadka iyo xaaladaha caafimaadka maskaxda sida walwalka iyo niyadjabka badanaa waxay leeyihiin astaamo ka duwan kuwa ay ku qabaan dadka waaweyn.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) ayaa daboolaya daaweynta caafimaadka hab dhaqanka ee dhalinyarada, Iyo sidoo kale barnaamijyo bilaash ah si loo taageero nabadgelyadooda, farxaddooda, iyo horumarinta xirfadaha nolosha.
Xuquuqda dhalinyarada (ka yar 18)
Gobolka Washington, carruurta yar yar uma baahna ogolaansho waalid ama ilaaliye si ay u helaan adeegyo caafimaad oo badan.
Da ': 13 iyo ka weyn
Waalidkey ma la ogeysiinayaa? Kaliya haddii adeeg bixiyuhu go'aansado in wadaagista macluumaadka ay ka faa'iideysan doonto daaweynta oo aan waxyeello kuu geysan doonin
Daaweynta caafimaadka maskaxda bukaan jiifka
Waalidkey ma la ogeysiinayaa? Haa
Daaweynta isticmaalka maandooriyaha bukaan socodka
Waalidkey ma la ogeysiinayaa? Kaliya haddii aad bixiso oggolaansho qoraal ah ama adeeg-bixiye go'aansado inaadan ku jirin xaalad maskaxeed si aad u sameyso xulasho macquul ah
Baaritaanka iyo daaweynta STD / HIV
Da ': 14 iyo ka weyn
Waalidkey ma la ogeysiinayaa? Maya
Adeegyada ka hortagga uurka, aadeegyada foosha, daryeelka dhalmada kahor
Da'da: Ma jiro wax xaddidan
Waalidiintayda / aabbahay ma la ogeysiinayaa? Maya
Helitaanka dhalinyarada ay haysato hoy la'aanta, da'yarta qaan-gaadhka ah, iyo kuwa aan qaan-gaarin ee la xoreeyay
Dhallinyarada ay haysato hoy la'aantu waxay heli karaan adeegyada daryeelka aasaasiga ah ee caadiga ah ogolaanshaha qof weyn oo dugsigooda jooga, tusaale, kalkaalisada dugsiga.
Qaar ka mid ah kuwa aan qaan-gaarin ayaa laga yaabaa inay helaan adeegyo kale oo daryeel caafimaad haddii bixiyaha uu go'aamiyo ilmaha yar inuu fahmo khatarta iyo cawaaqibka adeegga ama daaweynta la soo jeediyay oo uu leeyahay qaan-gaar ah inay go'aannada daryeelka caafimaadka kaligood gaaraan. Tan waxa loo yaqaan Mature Minor Doctrine waxaana aasaasay Maxkamadda Sare ee Washington kiis la odhan jiray 1967 Smith v. Seibly.
Dhallaanka la xoreeyay iyo dhalinyarada guursaday qof weyn ama qaan-gaar ah waxaa loo tixgaliyaa inay yihiin dad waaweyn oo iskood u ogolaan kara adeegyada daryeelka caafimaadka.
Laga bilaabo 2019, Gobolka Washington wuxuu soo saaray sharciyo cusub oo waalidiinta u fududeynaya inay soo farageliyaan daaweynta ilmahooda. Adiga uma baahnid ogolaanshaha ilmahaaga loogu talagalay soo socda:
Xuquuqdaada: Waxaad u kaxaysan kartaa ilmahaaga dhallinta ah si loo qiimeeyo lagana daaweeyo adeegyo daryeel caafimaad oo hab-dhaqan bukaan-socod ah
Shuruud: Daaweynta waa in loo qaddariyo daryeelka caafimaad daruuriga ah.
Xuquuqdaada: Waalid ahaan, waxaad go'aansan kartaa cunugaada inuu kaqeybqaato ilaa 12 kalfadhiyada daaweynta bukaan socodka ee caadiga ah.
Xuquuqdaada: Waxaad ka baran kartaa faahfaahinta ku saabsan baaritaanka ilmahaaga iyo daaweynta dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda.
Shuruud: Bixiyahooda daryeelka caafimaadka habdhaqanka waa inuu rumaystaa in wadaagista macluumaadka ay ka faa'iideysaneyso daaweynta oo aysan waxyeello u geysan doonin ilmaha.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Nofeembar 1, 2021